Ihe omimi: Oghere nzuzo nke ndị na-agba chaa chaa Ha achọghị ka ị mara
Ihe ọmụma na Technology na-abịa site n'ọtụtụ ihe. Dị ka ọmụmaatụ,ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyocha usoro azụmahịa, nke na-agụnye ịmepụta weebụsaịtị na blọọgụ iji mee ka mgbasa ozi ahịa ha.E nwere ọtụtụ ngwá ọrụ ọhụrụ, nke na-eduzi ndị mmadụ site na usoro mgbagwoju anya nke ịmepụta weebụsaịtị. N'otu ihe ahụ, ngwaọrụ ndị nwereeji hacker na-aga n'ihu ka ha na-akawanye mma. Ndị na-eme egwuregwu na-ewepụ ọtụtụ ozi nkeonwe yanaozi ndị ọzọ, nke nwere ike ịba uru - global pc expert inc.
Ha nwere ike mbanye anataghị ikike ma wepu ozi dị ka kaadị akwụmụgwọozi yana ozi ndị ọzọ bara uru. N'ihi ya, ndị mmadụ kwesịrị ịkpachara anya maka mwakpo ndị a tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ikeonye na-egwu ihe nwere ike ime. Ọtụtụ ndị na-eche otú ndị omempụ na-eji arụ ọrụ dị otú ahụ dị elu. Maka otu iji zere ndị na-agba ọsọma na-adị ndụ mbanye anataghị ikike mgbalị, e nwere mkpa ịghọta otú hackers mbanye anataghị ikike na ebe nrụọrụ weebụ.
Ụfọdụ n'ime ọrụ ha na usoro ha dị na nduzi a, kwadoro yaFrank Abagnale, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị.
SQL ogwu ogbugba.
Mwakpo a na-agụnye ịwakpo ebe nrụọrụ weebụ zoro ezo iji gụọnchekwa data ha. Nke a na-ezu ohi ozi nkeonwe dị ka kaadị akwụmụgwọ, aha njirimara, na okwuntughe. Ngwunye ogwu SQL na-eme na-eji pụrụ ichengwá ọrụ, nke nwere ike ịgụ ụdị data nchekwa data na ihe ọmụma ndị ahịa dị mkpa. Usoro a nwere ike ime ka data hacker dezie data, bulitema ọ bụ ibudata faịlụ site na nchekwa data site na ntinye ohere.
Mwakpo a gụnyere ịme ihe ntinye ederedenke ebe nrụọrụ weebụ. Mwakpo a gụnyere ime ka onye ahụ kụrụ aka pịa njikọ ma ọ bụ faịlụ na-efe efe. N'ihi ya, edemede ahụ na-etinye ihe nchọgharị ahụ. The hackernweta ohere dị ka cache, yana paswọọdụ maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ị nwere ike igbochi mwakpo a site na izochi ozi ahụdị ka iwebata usoro nhazi nke abụọ dị ka ozi na-agafe n'etiti onye ọrụ na ihe nkesa.
Ndị a bụ ndị na-ekiri weebụ, nke nwere ike ịghọ onye ọrụ n'ime inyenbanye data nbanye na peeji nke adịgboroja. Ihe ọmụma onye ọrụ na-etinye n'ime nwere ike ịbụ nke dị oké mkpa maka nchekwa nke usoro data. Maka ojoo ojoo,onye ọrụ ahụ chọtara data bara uru dịka okwuntughe tinyere ịnweta ntinye aka na weebụsaịtị. Ụfọdụ ihe mgbochi a na-eduga na nhazi nke aebe nrụọrụ weebụ na engines ọchụchọ na-eme ka nnukwu ụlọ ọrụ ahụ daa.
Mwakpo nke Middle-Man.
Ịntanetị bụ maka ịgbanwerịta data. Na ebe nrụọrụ weebụ, aonye ọrụ na-eziga ma na-enweta data si na ihe nkesa ma ọ bụ nchekwa data. Ka data na-agagharị, enwere nsogbu ụfọdụ, nke na-eme n'oge ọbụla nkeusoro. Nwoke na etiti mmadu na-ebuso ya agha na izuru ihe omuma a, nke nwere ike ibute nnukwu ihe omuma nke ulo oru.
Ndị omekome na-ewepụ ọtụtụ nde ego site na wayo na ụzọ ndị ọzọ. Ha na-eme ọtụtụenweghi ihe ndi ozo na-akpata nsogbu na ihe ojoo nye ndi ozo. Ọtụtụ ụdị nke mbanye anataghị ikike ọgụ ihe ịga nke ọma n'ihi ọtụtụ ndị ọma nadị n'ọtụtụ usoro usoro. Enwere mkpa inwe ezigbo ihe ọmụma banyere ọgụ ndị a. Nche nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke gịndị ahịa na-adabere n'ịdị irè nke usoro dị otú ahụ. Ị nwere ike ịmụta otú ndị na-agba ọsọ na-esi nwee ike ịbanye na iji nduzi a.